Aflagaadada iyo barobagaandada waa colaad iyo isir nacayb loo qabo qabiilka Hawiye! Mahad salaad – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Aflagaadada iyo barobagaandada waa colaad iyo isir nacayb loo qabo qabiilka...
Aflagaadada iyo barobagaandada waa colaad iyo isir nacayb loo qabo qabiilka Hawiye! Mahad salaad
Xildhibaan mahad salad ayaa qoraal dheer ku soo qoray bartiisa facebookga oo uu kaga hadlaayo nacaybka loo qabo Hawiye waxaanu ku qorey.
Maalmahaan waxa baraha bulshada soo buux dhaafiyay dad mas’uulyihiin sheeganaya oo aflagaadeynaya Madaxweyne Cali Mahdi iyo Muxiydiin Darba-Weyne. Waxaan iswaydiiyay maxaa lagu heystaa labadaan Oday. Baaritaan dheer kadib waxa ii soo baxay colaad iyo isir nacayb loo qabo qabiilka Hawiye in ay tahay waxa loo beegsanayo mas’uuliyiintaan.
Madaxweyne Cali Mahdi wuxuu yiri “Mudulood waa shiri karaa, cid wax uusan rabin Soomaaliya ka sameyn kartana majirto” waana hadal gar ah, sababtoo ah isagoo dalkaan ka soo noqday Madaxweyne ayuu waayay xurmadii iyo xaq dhowrkii uu ku lahaa dalkaan mid shaqsi ah iyo mid deegaan intaba. Tusaale ahaan:
Mida adeerkey Muxiyadiin Darba-Weyne nin Wasiir ah, una gafay Odayga iyo Bah Weynta Hawiye oo yiri adiga iyo dadka u hadlaya Gobolka Banaadir reer Baadiyeyaal ayaad tihiin, ayuu u jawaabay. Wuxuuna ku yiri Gobolka Banaadir canshuurtiisa ayaad cuntaa, waxna lagaa waydiin maayo ee dantaada haka habsaamin”. Waaba yaabe muxuu haleeyay oo isagana lagu heystaa?!
waxa masuul ka ah mahad salad kama turjumayo warsidaha Beegsonews
Suudaan ayaa mamnuucday soo galida rakaabka ka yimaada Britain, Netherlands, South...
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Socdaaladii ugu Danbeeyey ee Mudo Sadex Cisho ah...